सिसिएमसीको बैठक बस्दै, होला फेरि लकडाउन ? - Dainik Online Dainik Online
सिसिएमसीको बैठक बस्दै, होला फेरि लकडाउन ?
प्रकाशित मिति : ९ मंसिर २०७७, मंगलबार ४ : ३२
काठमाडौं । कोभिड-१९ संकट व्यवस्थापन समिति (सिसिएममी)को बैठक मंगलबार(आज) बस्दैछ ।
आज बस्ने बैठकले लकडाउनको विषयमा निर्णय गर्ने सम्भावना रहेको उपत्यका मेयर फोरमका सचिव तथा मध्यपुर थिमी नगरपालिका प्रमुख मदन सुन्दर श्रेष्ठले बताए ।